ပုရိသတို့ရဲ့ ရင်ခုန်နှုန်းတွေ ကို ဝုန်းဒိုင်းကြဲသွားအောင် ဆက်ဆီကျကျ ပုံလေးတွေ ကို ချပြလိုက်တဲ့ မင်းသမီးချောလေး ဂန္တဝင် – Online News Post
ပုရိသတို့ရဲ့ ရင်ခုန်နှုန်းတွေ ကို ဝုန်းဒိုင်းကြဲသွားအောင် ဆက်ဆီကျကျ ပုံလေးတွေ ကို ချပြလိုက်တဲ့ မင်းသမီးချောလေး ဂန္တဝင်
အသက် အရွယ်တွေ တဖြည်းဖြည်း ကြီး လာ ပေမယ့် ဂန္တဝင် က တော့ အမြဲ နုပျိုနေလို့ လူငယ်လေး တစ်ယောက် လိုပါပဲနော် … . အခု ဆိုရင် လည်း ဂန္တဝင် က” ကိုဗစ် ကြီး ပျောက်ကွယ် သွားတဲ့အခါ “ ဂန္တဝ င်” ရေထဲမှာ ဒီလိုပုံပြန်ရိုက်ချင် တာ”ဆိုပြီး ရေကူး ကန်ထဲမှာ ပျော်ရွှင် နေတဲ့ ပုံရိပ်လေး တွေကို တင်ပေး လာတာ ဖြစ် ပါတယ် ။ ညှို့အား ပြင်းတဲ့ အလှအပ တွေနဲ့ ရေကူး ကန်ထဲမှာ သာသာ ယာယာရေစိမ်နေ တဲ့ ဂန္တဝင်ရဲ့ ပုံရိပ် လေးတွေကို ပြန်လည် မျှဝေပေး လိုက်ပါရစေနော် … .
မင်းသမီး ချော တစ်ယောက် ဖြစ်တဲ့ ဂန္တဝင် က တော့ ဗီဒီယို ဇာတ်ကားတွေနဲ့ကြော်ငြာတွေအများအပြား ရိုက်ကူးခဲ့တာကြောင့် ပရိသတ် တွေလည်း သူမကိုသိမှာပါနော် … . ဂန္တဝင်က အချိန် ခဏ လောက် အနုပညာအလုပ်တွေနဲ့ဝေးကွာခဲ့ပေမယ့် အခုလတ်တလောမှာတော့ ကြော် ငြာလေးတွေ ရိုက်ကူးပြီး အနည်းအကျဉ်းပြန် လည် လုပ် ဆောင် နေပြီ ဖြစ် ပါ တယ် … .
ဂန္တဝင် ဟာ ဆိုရင် လည်းပဲ ဗီဒီယို ခေတ် ကတည်း က လူကြိုက် များခဲ့တဲ့ သရုပ်ဆောင် တစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်နော် … . ဂန္တဝင် က တော့ ပရိ သတ် တွေ ရဲ့ ချစ်မေတ္တာ ကို ပြန်လည် ရယူနေပြီး အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့နေထိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဂန္တဝင်ရဲ့အလှအပ‌တွေက အခုချိန်ထိ လည်း နုပျိုနေဆဲဖြစ်လို့ ငယ်ငယ် တုန်း ကအ တိုင်း လှပနေ တာဖြစ်ပါ တယ်နော် … .
အသက္ အရြယ္ေတြ တျဖည္းျဖည္း ႀကီး လာ ေပမယ့္ ဂႏၲဝင္ က ေတာ့ အျမဲ ႏုပ်ိဳေနလို႔ လူငယ္ေလး တစ္ေယာက္ လိုပါပဲေနာ္ … . အခု ဆိုရင္ လည္း ဂႏၲဝင္ က” ကိုဗစ္ ႀကီး ေပ်ာက္ကြယ္ သြားတဲ့အခါ “ ဂႏၲဝ င္” ေရထဲမွာ ဒီလိုပုံျပန္ရိုက္ခ်င္ တာ”ဆိုၿပီး ေရကူး ကန္ထဲမွာ ေပ်ာ္ရႊင္ ေနတဲ့ ပုံရိပ္ေလး ေတြကို တင္ေပး လာတာ ျဖစ္ ပါတယ္ ။ ညႇို႔အား ျပင္းတဲ့ အလွအပ ေတြနဲ႔ ေရကူး ကန္ထဲမွာ သာသာ ယာယာေရစိမ္ေန တဲ့ ဂႏၲဝင္ရဲ့ ပုံရိပ္ ေလးေတြကို ျပန္လည္ မၽွေဝေပး လိုက္ပါရေစေနာ္ … .
မင္းသမီး ေခ်ာ တစ္ေယာက္ ျဖစ္တဲ့ ဂႏၲဝင္ က ေတာ့ ဗီဒီယို ဇာတ္ကားေတြနဲ႔ေၾကာ္ျငာေတြအမ်ားအျပား ရိုက္ကူးခဲ့တာေၾကာင့္ ပရိသတ္ ေတြလည္း သူမကိုသိမွာပါေနာ္ … . ဂႏၲဝင္က အခ်ိန္ ခဏ ေလာက္ အႏုပညာအလုပ္ေတြနဲ႔ေဝးကြာခဲ့ေပမယ့္ အခုလတ္တေလာမွာေတာ့ ေၾကာ္ ျငာေလးေတြ ရိုက္ကူးၿပီး အနည္းအက်ဥ္းျပန္ လည္ လုပ္ ေဆာင္ ေနၿပီ ျဖစ္ ပါ တယ္ … .
ဂႏၲဝင္ ဟာ ဆိုရင္ လည္းပဲ ဗီဒီယို ေခတ္ ကတည္း က လူႀကိဳက္ မ်ားခဲ့တဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ တစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါတယ္ေနာ္ … . ဂႏၲဝင္ က ေတာ့ ပရိ သတ္ ေတြ ရဲ့ ခ်စ္ေမတၱာ ကို ျပန္လည္ ရယူေနၿပီး ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းနဲ႔ေနထိုင္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ဂႏၲဝင္ရဲ့အလွအပ‌ေတြက အခုခ်ိန္ထိ လည္း ႏုပ်ိဳေနဆဲျဖစ္လို႔ ငယ္ငယ္ တုန္း ကအ တိုင္း လွပေန တာျဖစ္ပါ တယ္ေနာ္ … .
Previous post ကိုယ်တိုင်သီဆိုထားတဲ့ အရမ်းမိုက်လွန်းတဲ့ သီချင်းလေး ကို ချပြလိုက်တဲ့ မော်ဒယ်လ်မလေး မျက်ဝန်းရဲ့ သီချင်း ရုပ်သံ
Next post ကြည့်ရှုသူတိုင်း အရမ်းအသဲယားသွားအောင် ချစ်စရာအမူအရာလေးတွေ နဲ့ Tik Tokဆော့ပြလိုက်တဲ့ မင်းသမီးချောလေး ခန့်ရဲ့ အမိုက်စား ဗီဒီယိုလေး